Archive du 20190909
Marc Ravalomanana mivady Nihaona tamin’ny Papa Fransoa ihany koa
Naneho ny hafaliany ka nidera sy nisaotra manokana ny Papa tamin’ny fahatongavany eto Madagasikara ny filoha Marc Ravalomanana, araka ny taratasy nalefany tamin’ny Papa Fransoa mitondra ny datin’ny 4 septambra.
Niteny indray ny Amiraly Ratsiraka “Tena fotoanan’ny fampihavanana izao”
Anisan'ny lohahevitra natsidiky ny Papa Fransoa ny fihavanana, izay soatoavina mampiavaka ny Malagasy.
Tandra vadin-koditra amin’ny tantaram-pirenena ny Gazety Tia Tanindrazana, izay feno folo taona katroka amin’ity anio ity.
Filoha Rajoelina Hiova famindra manomboka eto ?
Tsy nisy miafina amin’ny Papa Fransoa ny zava-misy eto Madagasikara, ary na tamin’ny teny malefaka aza dia mifono anatra sy hafatra lehibe ho an’ny Malagasy tsy an-kanavaka na ny mpitondra na ny entina na mpino kristianina na tsia na katolika na protestanta. Mahantra loatra ny Malagasy.
Gazety Tia tanindrazana Feno 10 taona
9 septambra 2009 – 9 septambra 2019. Feno 10 taona katroka anio alatsinainy ny nisian’ny laharana 001 an’ity gazety vakianao isan’andro ity.
Papa Fransoa sy ny fivondronamben’ny Eveka “Aoka ianareo ho akaikin’Andriamanitra sy ny mahantra”
Nanitrikitrika ny Papa Fransoa raha nihaona tamin’ireo Eveka ny hanatona akaiky ny Tompo sy ny sahirana.
Fivahinianan’ny Papa Fransoa Nahavita be ny mpitandro filaminana
Manodidina ny 5.000 ny mpitandro filaminana niparitaka teny Soamandrakizay ny sabotsy sy ny alahady lasa teo mba hanara-maso sy handamina ny hetsika rehetra manodidina ny fivahinianan’ny Papa Ray Masina.
Fasan’ny olon-tsambatra Victoire Rasoamanarivo Notsidihan’ny Papa, maro ireo ray aman-dreny no nangataka tso-drano
Avy nihaona tamin’ireo Eveka manerana ny nosy teny amin’ny katedraly Andohalo ny Papa Fransoa, dia nitsidika sy namangy ny fasan’i Victoire Rasoamanarivo olon-tsambatra.
Basket Tompondaka N1 A dingana faha-2 Mitarika ny Gnbc lehilahy sy ny Mb2All vehivavy
Taorian’ny “trêve papale” tamin’ny sabotsy sy omaly alahady dia hitohy anio alatsinainy 09 septambra ny fifaninanana basikety fiadiana ny ho tompondaka nasionaly 2019 sokajy N1 A lahy sy vavy izay
Rugby à XV « Qualification Top 20 2019» Nanjaka Analamanga tany Boeny sy Atsinanana ary Alaotra Mangoro
Nitohy tany Ambatondrazaka Mahajanga sy tany Toamasina ny fifaninanana rugby à XV « Qualification Top 20 2019 » tamin’ny
Soa fianatra Azo atao tsara ny manadio ny tanàna
Resaka etsy sy eroa ny fiovana endrika tampoka hita teto Antananarivo Renivohitra sy ny manodidina tato anatin'ny herinandro izao.
Fahefa-mividin’ny Malagasy Tsy mitsaha-mitotongana
Nihen-danja hatrany ny fahefa-mividin’ny Malagasy tato ho ato. Hita taratra tanteraka izany eny amin’ny fiarahamonina eny ary hita miharihary ny fahantrana.
Mampiaka-peo ny RNDC « Mila araha-maso ny mpamongady sy mpanafatra entana ! »
Efa nihaona tamin’ny minisitry ny varotra tamin’ny alalan’ny ANMCC izahay, hoy ny filohan’ny fikambanana miaro ny zon’ny mpanjifa na RNDC, Lita Rabetsara na Ralita,
Soamandrakizay Nisy ihany ny lesoka tamin’ny fandaminana
Raha efa somary nafampana ny andro tao ho ao dia nivadika izany, nanomboka ny sabotsy alina, ho an'Antananarivo renivohitra.
Olona manana fahasembanana ara-tsaina Tsy voajery loatra, voailikilika
Tsy dia voajery loatra ny zon’ireo olona manana fahasembanana ara-tsaina eto amintsika, indrindra fa ireo beazina eny anivon’ny ivontoerana natokana ho amin’izany.
Vavahady Soamandrakizay Ora efatra no lany tamina 1km
Avy eo amin’ny vavahadin’ Androhibe natokana ho an’ny manampahefana mihazo ny fidirana izay 1km avy any Antanandrano nandaniana ora efatra mahery.
Lozam-pifamoivoizana tany Ambanja Tsy misy ahiana ny ain’ireo mpivavaka tra-boina
Tsy misy ahiana ny ain’ireo niharan’ny lozam-pifamoivoizana tao Ambanja, raha iny hihazo ny fitsidihan’ny Papa ray masina taty an-drenivohitra iny ireo mpivavaka avy any Antsiranana.